« Fanovana amin’ny ratsy » -
AccueilTresaka« Fanovana amin’ny ratsy »
08/05/2018 admintriatra Tresaka 0
Mba noheverina ho mitandro ny fianaran’ny zana-bahoaka ireo milaza azy fa solombavambahoakan’ny fanovana, hay tena mamarina an-kady ireny zana-bahoaka mianatra any amin’ireny sekolim-panjakana ireny. Tsy mihevitra izay ho tohin’ny fanadinana atrehin’izy ireo ato ho ato. Amin’izao tokoa mantsy dia ireo ankizy mpianatra tsy manan-tsiny ireny no manamaro isa ireo mpanao fihetsiketsehana. Olona manana ny maha izy azy, nahita fiarana ary manana ny hajany izany depiote izany, ka mahalala tsara fa ny fanabeazana no fototry ny maha olombanona na tsia, kanefa dia sahin’izy ireo ny mitazam-potsiny ireny mpianatry ny Ceg na Lycée manatevina ny hetsika hataon’izy ireo. Ny depioten’Ambatofinandrahana, Christine Razanamahasoa aza moa dia tsy manan-kevitra ny hiteny ireo mpianatra ireo mba hamonjy lakilasy fa dia vao mainka manome rariny ny fahatongavan’ireo mpianatra ireo eny Analakely.
Voatery miteny eo anatrehan’izao fanaovana fitaovana politika ny ankizy mpianatra izao ny minisitra tompon’andraikitra, izay nanaovany antso avo mba hiaro ny fianaran’ireo zanantsika sy zandrintsika, na ho inona na ho inona fironan-kevitry ny tsirairay. Efa tokony hanomana ny fanadinana atrehin’izy ireo amin’ity taona ity koa ireo zanantsika sy zandrintsika ireo, hoy izy, koa mangataka antsika rehetra mba hanampy azy hianatra anaty filaminana tsy ho voakotaba sy ho voaelingelina.
Efa tsy vitan’ny hoe manery olona hivoaka ny minisitera intsony indray izany izao ireo depiote Tim sy Mapar fa efa mirotsaka manimba ny fianaran’ny zanaka malagasy ihany koa. Izany famotehana ny fianarana sy ny fanitsakitsahana ny zo fototry ny tsirairay izany tokoa àry ve ilay « fanovana » entin’izy ireo ? Tena ho fiovana any amin’ny ratsy tanteraka izany, ka dieny mbola tsy tara dia tokony horaisina am-pahendrena itony tenin’ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena itony. Mahamenatra ihany raha famotehana ny ho avin’ny taranaka toa izany no lazaina fa “ fiovana ” dradradradraina , ka hitondrana anara-maneso mihitsy fa depioten’ny fanovana.
Ilaina ny fahazoana ilay fiara tsy mataho-dalana avy amin’ny fanjakana, saingy mbola tsy fotoana tokony hitakiana izany izao, raha ny hevitr’ireo solombavambahoaka izay nandany ilay lalàna mamaritra ny teti-bolam-panjakana 2017. Ny fanalefahana ny fahasahiranan’ny vahoaka ...Tohiny